5 ukufundwa okumnyama kakhulu ngoLwesihlanu oMnyama (okanye iSaxon Black ngoLwesihlanu) | Uncwadi lwangoku
5 ukufundwa okumnyama kakhulu ngoLwesihlanu oMnyama (okanye iSaxon Black ngoLwesihlanu)
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Inoveli, Inoveli emnyama
I NgoLwesihlanu uLwesihlanu, I-Anglo-Saxon Black Friday kwaye ingeniswe kula macandelo ethu, kwaye akukho nto ingcono kunokusebenzisa ithuba lokwehla ngokubanzi kwamaxabiso kunokufunda. Ulwazi kunye nokuzonwabisa azihlali ndawo, kodwa iincwadi zihlala kuyo nangaphantsi. Kwaye kwifomathi yabo yedijithali bahlisa amaxabiso abo nangakumbi.
Njengomfundi onomdla, ndisalithanda iphepha, kodwa ndikwaqhelana nayo nayiphi na ifomathi abanayo.amabali endiwathandayo. Kwaye zezona zimnyama kakhulu, oko kukuthi, zezona zilungileyo ngoLwesihlanu waloo mbala. Ke ndikhetha ezi zintlanu, izipho ezigqibeleleyo zangoLwesihlanu oMnyama.
1 Imfihlo ye-LA-uJames Ellroy
2 Ilanga likaCanzibe- uAntonio Manzini
3 Iziphumo zeDomino-Olivier Norek
4 Unxanelwe - uJo Nesbø
5 Iiselfies -Jussi Adler-Olsen
Imfihlo ye-LA -UJames Ellroy
Kwaye siya kuhambo. Kuqala sawela iAtlantic ukuya kufika ePacific ngenkulu phakathi okukhulu, iMad Dog UJames ellroy. Kwiminyaka engama-XNUMX eyadlulayo uhlengahlengiso olubalaseleyo lomdlalo wakhe owaziwayo, Imfihlo ye-LA, ke yeyiphi indlela ebhetele yokuyifumana okanye ukuyifunda kwakhona.
Le inoveli inzima ngumceli mngeni nakwabafundi abafunwa kakhulu, kodwa kufanelekile ukuba uyiqonde kwaye umangaliswe Ubundlobongela kunye nomzobo ocacileyo uEllroy awubalisayo malunga neLos Angeles kwiminyaka yama-50 ngokusebenzisa amapolisa amathathu yeLAPD yakhe edumileyo. Ngaphandle kwemvume kunye nesitayile sayo somnxeba kunye nesimbo sokusika, iyelenqe lokudibanisa kodwa lokufunxa libonisa icala elimnyama leso sixeko kunye nalaa minyaka.
Ilanga likaMeyi - UAntonio Manzini
Ukubuyela kwi-Yurophu yakudala, siya kuqala emazantsi, e-Itali nase-Aosta Valley ukuya kudibana nomhloli ongaqhelekanga u-Rocco Schiavone, ngu-Antonio Manzini. Abo kuthi bawele ekuzinikeleni kwakhe kodwa nakwimfesane yakhe nakwizithandani kwibala lakhe lokuqala Umkhondo omnyama, Silandele iSchiavone ngamanye amabali amathathu. Eyokugqibela, leyo Ilanga likaMeyi, sele ifikelele ekuvuthweni nasekudityanisweni kwengxelo. Ibalulekile kubathandi belo phawu lwesiTaliyane abalima ngalo inoveli yolwaphulo-mthetho.
Isiphumo seDomino -Olivier Norek
Emva koko senyuka kancinci saya eParis ukuya kunika umphathi kathathu UVictor Coste. Ndingayenza, kunye nomdali wayo, owayesakuba ngumphathi wamapolisa wezomthetho u-Olivier Norek. Isiphumo seDomino sisihloko esikhulu, ibhaso ngo-2016 kwelonaveli libalaseleyo lolwaphulo-mthetho laseYurophu, kunye nokuzonwabisa kunye nokungaqhelekanga inoveli eyakhiwe kakuhle, kunye nomxholo kunye nabalinganiswa abaphumelela ukuthanda yabafundi. Kwaye ikwabonisa ukuba nabani na oyibhalileyo uneetafile ezilungileyo, ezokwenene. Ukufumanisa
Unxaniwe -UJo Nesbø
Emva koko siya emantla emantla ngomnye woonyana abakhulu kwaye baphumelele kakhulu kubanda baseNorway. Jo Nesbø iyaqhubeka ukuqala ngeyona khowudi imnyama (kunye nesalmon) yezo ntlawulo kwaye ngo-Matshi walo nyaka wazisa inoveli yakhe yamva nje kukhenketho lwehlabathi, Unxaniwe. Eli libali leshumi elinanye elineenkwenkwezi kwisidalwa salo esiphakamileyo nesithandekayo, umkhomishina UHarry hole. Ngeli xesha uHole uya kujongana naloo nto umntu obulala kakhulu wamsinda wangena Amapolisa kwaye amaxhoba abo bangabasebenzisi benethiwekhi yonxibelelwano yeTinder.
Nabani na oyaziyo kwaye oyifundileyo uyazi kakuhle into elungileyo enezandla. Kubafundi beNeophyte yeNesbø, nangona iincwadi ezikolu ngcelele zinokufundwa ngokuzimeleyo, akukhuthazwa ukuqala indlu ngophahla kuba izakuphulukana nayo abalinganiswa kunye neemeko eziye zajikeleza iminyaka engamashumi amabini kunye namanye amabali alishumi. Kodwa kwi-nesboadictos kufuneka ifundwe.
Selfies -UJussi Adler-Olsen
Kwaye okokugqibela, inoveli entsha kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo yityala lesixhenxe le ISebe Q kunye nabalinganiswa bayo, irascible UCarl Mørck kunye nomncedisi wakhe ekhethekileyo Assad.
Kwipaki eseCopenhagen kubonakala ngathi isidumbu sexhegwazana. UMkomishinala uCarl Mørck ugunyazisiwe ukuba aphande ngale nto yokubulala, eneemeko ezinxulumene nokunye ukufa okwenzeka kwiminyaka eyadlulayo. Kwangelo xesha Uthotho lombulali uzinikele ekusebenzeni ngaphezulu kwabafazi abancinci. Ukongeza, abaphathi beSebe le-Q abonwabanga ngezinga eliphantsi lokusonjululwa kwamatyala kwaye bafuna ukunciphisa inxenye yenkxaso mali yesebe.
Kodwa uRose, umncedisi kaCarl Mørck, naye uhamba ngexesha elibi. Ukhathazwa ziinkumbulo zeziganeko zangaphambili ezamnyanzelayo ukuba angene kwisibhedlele sabagula ngengqondo. Okokugqibela, banantoni yokwenza le Unontlalontle onenzondo kunye nabafazi abathathu abathandekayo abanomdla kakhulu ngenkangeleko yabo, abadibana kwigumbi lokulinda leofisi yakhe kwaye bafe umzuzu abenza ngawo selfie?
Ngapha koko, amabali amahlanu ahlukile njengakwinqaku eliqhelekileyo lobumnyama eligqiba yonke intokodwa ayinakuze ikwazi ukukhanya ngokuhlala iphantsi kwayo. Amabali amahlanu acetyiswayo kolu Lwesihlanu u-Mnyama.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » 5 ukufundwa okumnyama kakhulu ngoLwesihlanu oMnyama (okanye iSaxon Black ngoLwesihlanu)
"Fugas", incwadi entsha yomculi uJames Rhodes
UCharles Perrault: i-biography kunye namabali abantwana abalungileyo